को हुन् प्रचण्डविरुद्ध अमेरिकामा उजुरी गर्ने डा. तिलक श्रेष्ठ ? - Dainik Nepal
को हुन् प्रचण्डविरुद्ध अमेरिकामा उजुरी गर्ने डा. तिलक श्रेष्ठ ?
दैनिक नेपाल २०७५ चैत ५ गते १६:३८
काठमाडाैँ, ५ चैत । पत्नि सीता दाहालको उपचारका लागि अमेरिका भ्रमणमा रहेका नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डविरुद्ध उजुरी परेको विषय चर्चामा छ । उजुरी परेकाे समाचार सार्वजनिक भएसँग उजुरीकर्ताका विषयमा पनि साेधखाेज हुने नै भयो ।
सत्तारुढ दलका अध्यक्ष र दुईपटक देशका प्रधानमन्त्री भइसकेका प्रचण्डविरुद्ध आखिर कसले हाल्याे अमेरिकामा मुद्धा ? चासोको विषय बनेको छ । प्रचण्डविरुद्ध केन्टुकी स्टेट युनिभर्सिटीमा कार्यरत डा. तिलक श्रेष्ठले उजुरी गरेको खुलेको छ ।
उनले बाल्टीमोरस्थित संघीय ब्युरोमा युद्ध अपराध र आतंकवादी कार्यमा संलग्न भएको भन्दै अध्यक्ष प्रचण्डविरुद्ध आइतबार उजुरी दर्ता गरेका थिए । उनले दायर गरेको उजुरीपत्रमा प्रचण्डलाई आतंककारी भनिएको छ।
‘आतंकवादी भनेर चिनिएका पुष्पकमल दाहाल नेपालबाट आएका छन् । उनी अमेरिकाको आतकंककारी सूचीमा रहेका थिए। उनी संलग्न भएको गतिविधिका कारण १७ हजारभन्दा बढी गरिब नेपाली मारिएका थिए,’ डा श्रेष्ठले दायर गरेको उजुरीमा उल्लेख छ।
श्रेष्ठ हाल केन्टुकी स्टेट युनिभर्सिटीमा रिसर्च एसोसिएटका रुपमा कार्यरत रहेको विश्वविद्यालयको वेवसाइटमा उल्लेख छ । उनले यसअघि नर्थ एलाबामा सेन्टर फर एजुकेशन एक्सिलेन्समा शिक्षाविद्का रुपमा काम गरेका थिए। उनले युनिभर्सिटी अफ फ्लोरीडामा भौगर्भिक इन्जिनियरिङ विषयको अध्ययन गरेका थिए।
विद्यालय शिक्षा काठमाडौंको पद्मोदय हाइ स्कुलबाट पूरा गरेका श्रेष्ठ विद्यावारिधि उपाधि प्राप्त गरेका छन् । उनी हाल अमेरिकाको हन्टभिल्ला अल्बामामा बस्दै आएका छन् ।